Saritanin’ireo Toerana Manan-tantara ho an’ny Fiangonana
Sarintany 4: Kirtland, Ohio, 1830–1838
(tsindrio raha atao lehibebe kokoa)
Tranon’ i Newel K. Whitney Tao no nonina nandritra ny herinandro maromaro i Joseph sy i Emma taorian’ ny nifindrany voalohany tao Kirtland ny taona 1831.
Toeram-piompiana sy fambolen’ i Isaac Morley Tao no nonina i Joseph sy i Emma Smith ny volana Martsa ka hatramin’ ny volana Septambra taona 1831. Tao no natokana ireo mpisorona avo voalohany. Nanao ny Dikan-tenin’ i Joseph Smith (DJS) i Joseph.
Tranombarotr’ i Newel K. Whitney Tao no nomena ny Fiadidiana Voalohan’ ny Fiangonana ireo fanalahidin’ ny fanjakana. Tao no nivory voalohany ny sekolin’ ny Mpaminany. Teo am-pamitana tao ny DJS tamin’ ny taona 1833. Tao no nonina i Joseph sy i Emma nanomboka ny taona 1832 ka hatramin’ ny taona 1833. Maro ny fanambarana noraisin’ i Joseph tao.
Trano fandraisam-bahinin’ i John Johnson Tao no nantsoina ho Patriarika voalohany ao amin’ ny Fiangonana i Joseph Smith rainy, ny taona 1833. Nahitana ny trano printy voalohany tao Kirtland ilay tranom-bahiny. Natonta tao Ny Evening and the Morning Star taorian’ ny naharavan’ ny fitaovana fanontana printy tao amin’ ny Fivondronan’ i Jackson, Missouri. Avy tao no niaingan’ ny Apôstôly Roa ambin’ ny folo ny 4 Mey 1835 hamita ny asa nanirahana azy voalohany.
Tranon’ i Joseph Smith zanany Nonina tao i Joseph sy i Emma ny taona 1834 ka hatramin’ ny taona 1837. Natomboka ny fandikana ny Bokin’ i Abrahama.
Trano Printy Nomena tao amin’ io trano io ny Lectures on Faith. Tao no nantsoina sy natokana ny Apôstôly Roa ambin’ ny folo sy ny Kôlejy Voalohan’ ny Fitopololahy. Natonta tao ny Fotopampianarana sy ny Fanekempihavanana (famoahana voalohany mbola), ny Bokin’ i Môrmôna (famoahana faharoa ny boky), Ny Evening and the Morning Star, ny Latter Day Saints’ Messenger and Advocate, ary ny famoahana voalohany ny Elders’ Journal.
Tempolin’ i Kirtland Io no tempoly voalohany tamin’ izao fotoampitantanana izao. Niseho sy nankasitraka ny tempoly i Jesoa Kristy. Niseho i Mosesy, i Elià ary i Elia ka namerina ireo fanalahidin’ ny fisoronana sasany (jereo F&F 110). Nivory tao koa ny sekolin’ ny Mpaminany. Noraisina tao ireto fanambarana ireto: F&F 109, 110, 137.
Kirtland (tsy voalaza ny toerana) Nankatoavina ho soratra masina ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana ny 17 Aogositra 1835. Isan’ ny fanambarana azo tao Kirtland ny F&F 41–50, 52–56, 63–64, 102–104, 106–110, 134, ary 137. Ny Fizarana 104 dia manondro ny fananana sasany izay homena hotandreman’ ny mpikamban’ ny Fiangonana mandray anjara ao amin’ ny lamina miray (jereo andininy 19–46).